NMDC Editor – NMDC
Tuesday November 10th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
သတင်းအသိ သတိရှိကြပါစို့ ဒေါက်တာဇင်မာကျော် (သတင်းအတတ်ပညာ) ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် အင်တာနက်နှင့် စမတ်ဖုန်းနည်းပညာများကြောင့် သတင်းအချက်အလက်ရယူမှု ရေစီးကြောင်း ပြောင်းလာသည့်အတွက် မီဒီယာ ရယူမှုပုံစံလည်း ပြောင်းလဲလာကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးပြုမှု မြင့်တက် လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် သတင်းအချက် အလက်များစွာ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်စီးဆင်းနေသည့် လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွင် မှန်ကန်၊ ခိုင်လုံသည့် သတင်းများ အပြင် သတင်းတုဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည့် လုပ်ကြံသတင်းများစွာလည်း ရောထွေးပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသည်။ လက်ရှိကာလတွင် ပြည်သူများအကြား စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် သိလိုစိတ်မြင့်မားနေသော ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဘေးနှင့် ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများ၊ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေး၏ ပင်စည်ပင်မဖြစ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဦးတည်ပစ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ကြံသတင်းများကို [...]
NMDCမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ မင်္ဂလာပါ… နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် McKinsey & Company မှ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Youth Leadership Program ကို Zoom App မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ခွင့်ရမလဲ? YLP ကို NMDC, YUEco, YTU တက္ကသိုလ် ၃ ခု မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပါဝင်နိုင်ပြီး University ၃ ခုအတွက် exclusive opportunity ကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည့်အတွက် လက်မလွှတ်သင့်သည့် [...]
20.9.2020 မှာ NMDCer တို့အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Webinar ( How to Join YDSC Open Study Groups) မှာ တက်ရောက်မပါဝင်လိုက်ရသည့် သူများအတွက် Recording ပြုလုပ်ထားပြီး ယခုလို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ Yangon Data [...]
Monday September 21st, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
NMDC မှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် YDSC (Yangon Data Science Community) နှင့် NMDC SU တို့ ပူးပေါင်းပြီး DATA SCIENCE ကို သင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည့် – What’s YDSC? YDSC ဆိုတာ Data Science အရွေ့တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်နေသည့် Impact-driven Organization တစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။ ဒေတာအချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုပြီး လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ ၊ လူထုပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒေတာအချက်အလက်များနှင့် ပက်သတ်သည့် လူထုပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ [...]
Friday September 18th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Monday September 14th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) NMDC Major Guide
Friday September 4th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
NMDC Messenger Chatbot
NMDC Messenger Chatbot.. http://m.me/nationalmanagementdegreecollege Brought to you by NMDCSU #NMDCSU #NMDC #MessengerChatBot #DigitalSU #DigitalUniversity
Friday August 21st, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
An extremely tiny enemy of the entire world called 2019 Novel Coronavirus has expanded its battlefield to Myanmar with the first two positive cases announced on 24th March 2020. And this pandemic has not only resulting challenges to the [...]
Wednesday August 19th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
We proudly introduce another Myanmar partner… The powerful team of the National Management Degree College (NMDC), which is lead by Dr. Tin Tin Htwe, the Principal of the NMDC, accompany with Dr. Aye Thanda Soe, Professor and Head of Department [...]
Monday August 17th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Friday August 14th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) NMDC Virtual Student Forum 2.0, EPP week, Day 2
Thursday August 13th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) NMDC Virtual Forum 2.0, EPP Week, Day 1
Wednesday August 12th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) EPP Week : PlanningaPromising Career for your Future
Tuesday August 11th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Monday August 10th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Panelists: -U Phyo Wai Yar Zar (Managing Director of Diethelm Myanmar) -Ma Yin Myo Su (Managing Director of The Inle Princess Group, Founder of The Inle Heritage Foundation) -Ma Su Hlaing Win (Senior Corporate Communication Officer of Yangon Aerodrome Company Limited, Director [...]